Isetshenziselwa ukusika nokusika amakhadibhodi, ibhodi elimpunga, njll. Kuyimishini edingekayo yokuthola izincwadi ezilukhuni namabhokisi ezipho ebanga eliphakeme.
Ingcindezi yewayini bubble umshini
168 senes ingcindezi yewayini bubble umshini ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende ukwakhiwa kwemishini entsha yokubumba ibhokisi lesipho sephepha, amabhamuza womoya ongaphezulu, imibimbi, ukuhlanekezela, negolide kanye nesiliva amakhadibhodi, umphumela wokunamathisela okhethekile wephepha awulungile, iphepha lephepha elisheshayo imihuzuko nezinye izinkinga zokulinganisa umshini.
Izinhlangothi ezine onqenqemeni umshini
Ebhokisini lewayini eliqeqeshiwe, ibhokisi lesipho, uhlobo lwetiyi, kanye nochungechunge lwezicelo zokupakisha zamakhadibhodi empunga.
Umshini wokuhlanza ngesandla
Idizayini yalo mshini iyinoveli, icwecwe, iphephile, ihlala isikhathi eside futhi kulula ukuyigcina.
Umshini wokugoqa ozimele 211 ngokuya ngesidingo semakethe ukwakhiwa kwensimbi entsha, isilinda esezingeni eliphakeme, wo Chuan PLC Taiwan wemview control screen visual control, parameter ukulungiswa.
Lo mshini usebenzisa uhlobo lwamanzi okususa i-powder, olungasusa uthuli kukayinki wokuphrinta futhi luthuthukise ikhwalithi yokukhiqiza. Ikhanda lokulethwa kukawoyela lithatha isondo lenjoloba elenza kahle futhi eliqinile, ukunemba kocwecwe oluyisidina-ukuhlanza kulula ngaphandle kokulimaza ithangi likawoyela. Ummese ungasetshenziswa futhi isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, ukuncipha kwephepha langemuva kungagcinwa njalo.
Isistimu yokuqaqa ezenzakalelayo: ifakwe isilawuli sokungezwani, ukusebenza kahle okuphezulu nokuqina ngaphandle komthelela.
Umshini wokumaka ibhokisi oqinile ozenzakalelayo nge-robot
Umshini webhokisi lesipho, ibhokisi lokupakisha, amabhokisi enziwe ngomshini womugqa womshini, okulahlwayo kuyaqaphela ukusonga okwenziwe, indlebe eligoqiwe, ukususwa kwamagwebu nokubunjwa nokugoqwa nokuqhubeka kokusebenza, kungonga isikhathi esiningi nokufakelwa, kuthuthukise ngempumelelo umkhiqizo isivuno senza umkhiqizo wokuzikhethela wokukhiqiza ibhokisi lokupakisha lebhizinisi.
Ingahlanganiswa ngokuphelele nomshini wamabhokisi we-othomathikhi wendawo yonke kanye nomugqa womhlangano ozenzakalelayo.
Emakethe yanamuhla yomkhakha wokupakisha, ukuze kuthuthukiswe ukuncintisana komaki kanye nokwethulwa kwemishini ezisebenzelayo sekuyindlela enkulu ekuthuthukiseni amabhizinisi enkampanini yokupakisha.
Okuzenzakalelayo High-Speed ​​Amatebhe Iwindi wokuvikela ngocwazi Machine (Glue Water-based / Glue Oily / Pre-camera Film)
Lo ngumshini wokulaminetha iwindi osebenza ngemisebenzi eminingi, ngokufudumeza nangokucindezela iroli yensimbi e-laminating ukunamathisela ifilimu ephepheni elihlanganisiwe. Umphumela omuhle we-lamination ungafinyelelwa futhi izindleko ziyancipha.
I-Automatic High Speed ​​UV Spot Varnishing Machine (Imisebenzi Yesibili, yawo womabili amaphepha aminyene nacinene) I-All-way Grip Tooth Ukudlulisa